သင်၏စစ်တမ်းများသည်ကောင်းကျိုးထက်ပိုမိုအန္တရာယ်ရှိသလား။ | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2009 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 23, 2011 Douglas Karr
ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာတိုင်းတွင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းသို့မဟုတ်မဲရုံတစ်ခုစီပါ ၀ င်သည်။ တွစ်တာမှာရှိတယ် ရေနံချောင်း, PollDaddy သည်တွစ်တာသီးခြားကိရိယာတစ်ခုစတင်ခဲ့သည်, SocialToo တွင်တွစ်တာနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တို့အတွက်မဲရုံအက်ပ်များရှိသည်, Zoomerang တွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဘက်စုံသုံးစစ်တမ်းကိရိယာရှိသည်နှင့် LinkedIn မှာလူကြိုက်များတဲ့မဲရုံတွေရှိတယ် လျှောက်လွှာ။
ကုမ္ပဏီများသည်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းများကို၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကသူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်မည်သို့သဘောထားကြောင်းပြသရန်အတွက်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းများပြုလုပ်နေသည်။ ဤစစ်တမ်းနှင့်မဲရုံများသည်ပိုမိုပျံ့နှံ့ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍ ပို၍ မြင်တွေ့ရသည်။ သို့သော်ယေဘူယျအားဖြင့်မေးခွန်းများ၏အရည်အသွေးနှင့်နောက်ဆက်တွဲရလဒ်များကျဆင်းလာသည်။ ဤစစ်တမ်းများသည်ကုမ္ပဏီများအားကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ မကောင်းတဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းသို့မဟုတ်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုထိခိုက်နိုင်သည်။
ဤစစ်တမ်းမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာမှာမရေမရာဖြစ်မှုနှင့်ဖြစ်သည် လိုအပ်သည် ငါသဘောမတူစေခြင်းငှါသော်လည်း option တစ်ခုရွေးရန်ငါ့ကို မည်သည့် တုံ့ပြန်မှုများမှန်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအားလုံး မှလွဲ၍ အားလုံးအောင်မြင်စွာသုံးစွဲပြီးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အဖြေအတွက်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ရန် ပို၍ သင့်တော်ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်စေရန်လိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စသည်ခဲယဉ်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်မရင်းနှီးသောရလဒ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်ရောင်းဝယ်မှုနှုန်းမြင့်မားသောကုမ္ပဏီများနှင့်မဲရုံများနှင့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ စွန့်ခွာထွက်သွားကြသောဖောက်သည်များနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲတင်ပြသောပြtheနာများကိုဖြေရှင်းမည့်အစားကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းတို့အဆင်ပြေသည့်နေရာများကိုအာရုံစိုက်ရန်ကိုယ်ပိုင်စစ်တမ်းမေးခွန်းများနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကိုလက်ဖြင့်ရွေးချယ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့သိတဲ့ပြaနာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတခုဟာသူတို့ရဲ့လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်သော့ချက်ကျတယ်၊ ဒါကမီးမောင်းထိုးပြမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုရှောင်တာပါ။ Mah ။
၀ ယ်ယူသူစစ်တမ်းကောက်ယူသည့်ကုမ္ပဏီ၏အကြံဥာဏ်ကိုရယူခြင်းသည်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အသုံးချကြောင်းစစ်တမ်း နှင့်ရရှိသွားတဲ့ ပိုမိုမြင့်မားသောတုံ့ပြန်မှုနှုန်းထားများ။ နောက်လိုက်ဖို့သေချာပါစေ Walker ပြန်ကြားရေးဘလော့ဂ် - ၎င်းတို့တွင်ဖောက်သည်၏တုံ့ပြန်မှုကိုထိရောက်စွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွေ့အကြုံနှင့်လမ်းညွှန်များစွာရှိသည်။
သင်၏နောက် Twitter စစ်တမ်းကိုမပို့မီသင်သည်ပညာရှင်စစ်တမ်းကုမ္ပဏီ၏အကြံဥာဏ်ကိုရယူလိုပေမည်။ ၎င်းတို့သည်သင်၏စာများကိုရေးဆွဲရန်၊ တုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ရန်၊ စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးသောသို့မဟုတ်အထင်မြင်မှားစေသောမေးခွန်းများကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်တုံ့ပြန်မှုများအပေါ်အမှားအယွင်းကိုနားလည်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
သင်တို့သည်လည်းပိုမိုအားကောင်းတဲ့စစ်တမ်းအင်ဂျင်ကိုအသုံးချလိုပေမည်။ ငါကပရိသတ်တွေအများကြီးပါ မင် (သူတို့ဟာသူတို့သူငယ်ချင်းတွေကြောင့်မဟုတ်ပဲ) တကယ်တော့တက်ကြွတဲ့စစ်တမ်းကိုငါတက်နိုင်လို့ပါ။ မေးခွန်းတစ်ခုရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုအခြေခံပြီးစစ်တမ်းကောက်သူကိုသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုနက်နက်နဲနဲလေ့လာတဲ့မေးခွန်းအသစ်တစ်ခုဆီကိုငါပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
6:2009 pm မှာအောက်တိုဘာ 2, 50
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောတူသည်။ သင်၏အချက်ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်အတွက်သုတေသနပြုသည့်အရာအများစုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုထားကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ မကြာခဏဆိုသလို "သုတေသီများ" သည်လူတို့၏ထင်မြင်ယူဆချက်သည်ယုတ္တိတန်သို့မဟုတ်လုံခြုံစိတ်ချရသောအဖြေများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမ ဦး စွာဝယ်ယူခဲ့သည်ဟုပြောကောင်းပြောနိုင်သည်၊ သို့သော်လက်တွေ့တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အခြားအရာတစ်ခုရှိသည်။
6:2009 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 42
6:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 3, 12
? ??? ??? ??????? ?? ????? ?? ????, ??? ???????? ??????????? ????? ??? ?????????? ?? ??? ?????? ??? -? ။ ?????